Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး58 Sivasအဆိုပါ Sivas အမြင့်မြန်နှုန်းရထားခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းလှုံ့ဆော်
28 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 58 Sivas, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, တူရကီ 0
Sivas ခရီးသွားလုပ်ငန်း high-speed ကိုရထားလှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်
အဆိုပါ Sivas Castle Project မှတန်ဖိုးပေါင်းထည့်တံ့သော Sivas မြို့တော်ဝန် Hilmi Bilgin, ဆိုက်၏လယ်ပြင် bulunarak စာမေးပွဲအတွက်စေ့စပ်ထွက်သယ်ဆောင်လေ့လာမှုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်အပေါ်စျေးနှင့်အစာစားခြင်းအိမ်များဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အရှိန်အဟုန်ရရှိခဲ့အကြား၌, Castle စီမံကိန်းမှာစာကြည့်တိုက်ပေါင်းစပ်ဆက်လက်နေချိန်မှာဂရိတ်ဗလီနှင့် Madrasa တလက်ပေါ်ရှေးဟောင်းသုတေသနတူးဖော်ကောင်းကင်။
Sivas ၏ Konak ခရိုင်ဗိသုကာစီမံကိန်းများ၏အသွင်သဏ္ဌာန် built-in ပါလိမ့်မည်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူဖန်တီးပါလိမ့်မည်, မြို့အတွက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှကိုအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ စီမံကိန်း၏စုစုပေါင်းနယ်ပယ် 102 အဆောက်အဦးများနှင့်အတူ outbuilding built လိမ့်မည်။
"ဟုအဆိုပါ Castle ပူးပေါင်းခြင်းစီမံကိန်းမှမိုဃ်းကောင်းကင်နှင့် GRAND ဗလီဗလီ,"
စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းသမ္မတဦးသိန်းစိန်အချက်အလက်များ၏လယ်ပြင်၌ရှိသောစာမေးပွဲအပြီးတစ်ဦးအကဲဖြတ်စေသည် "ဟုအဆိုပါလေ့လာမှုနေဆဲဖြစ်သည်။ ပထမအဆင့်စီမံကိန်းဧရိယာ၏အဘို့ကို xnumx'lik% နုသေးဖုံးလွှမ်း။ ကျွန်မအနေနဲ့နောက်ထပ်တင်ဒါနု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရပြီလိမ့်မယ်နဲ့အတူကျနော်တို့ဒီနှစ်% xnumx'lik ပါဘူးမျှော်လင့်ပါတယ်။ 25 သန်းကိုရှာဖွေတဲ့စီမံကိန်း၏ကုန်ကျစရိတ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုးကောင်းကင်များနှင့်က Grand ဗလီဗလီရဲတိုက်စီမံကိန်းကိုပေါင်းစည်းကြပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့က Sivas အတွက်သမိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဓိပ္ပါယ်ကိုအဓိကအလှူငွေစေမည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်သည်၎င်း၏လက်ရှိပြည်နယ်ထဲမှာအလှဆုံးစတုရန်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sivas မြို့စတုရန်းစီမံကိန်းကိုပေါင်းစပ်ငါတို့ခိုလှုံရာဖြစ်တော်မူ၏, ငါတို့သည်ဤလောကရဲ့အမှတ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ဦးဖြစ်လာရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားဤစီမံကိန်းဂုဏ်ယူပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးအပိုင်းအစအမှေပုံပါအထူးပစ်စညျးအဖြစ်တစ်ဦးထက်ပို livable မြို့ဖန်တီးရန်။ "သူကဆိုသည်။
"အမြန်ရထား Boost ခရီးသွားလုပ်ငန်း"
အားလုံးစီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ပေါင်းစည်းနေကြတယ်, သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြောနေကြပါတယ်စဉ်းစားပါ, "မျှော်လင့်လာမည့်နှစ်တွင်မြို့မှလာမယ့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားနှင့်အတူ Sivas တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ တူရကီ, အစ္စတန်ဘူလ်, Konya မှ 2,55နာရီအကြားမြို့ကြီးများအချိန်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်တိုအတွင်းရောက်ရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအနာဂတ်၌အကြှနျုပျတို့၏နိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားလုပ်ငန်းပြင်ပကဤစီမံကိန်းများ၏အများကြီးပိုအရေးကြီးပုံပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ 2020 - 21 နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းများကိုသားနှင့်အရိုးဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်မလှူဒါန်းခဲ့သူကိုလူတိုင်းကကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ "သူကဆိုသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဒုတိယသမ္မတပညာတော်သင်ခရီးစဉ်နှင့် Bekir SıtkıEminoğluနှင့်ကန်ထရိုက်တာအရာရှိတွေသက်ဆိုင်ရာဌာနမန်နေဂျာဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့ကြသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးစဉ်ကာလအတွင်း။
jolly တောင်တန်း Cableway Düziçiစီမံကိန်းကိုခရီးသွားလုပ်ငန်းလှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ် 29 / 01 / 2014 jolly တောင်တန်း cable ကိုကားတစ်စီးစီမံကိန်းကိုDüziçiခရီးသွားလုပ်ငန်းဖော်ကျူးဖို့: Düziçiမြို့တော်ဝန်Ökkeşနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသည်ဒေသတွင်း၌ခရီးသွားလုပ်ငန်း calanna ဖို့ရည်မှန်း "jolly တောင်တန်း Cable ကိုကား Project မှ" အရှေ့မြေထဲဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီများကလက်ခံလိုက်ပါသည်ဟုသူကဆိုသည်။ မြို့တော်ဝန်Ökkeşနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော, AA ကိုသတင်းထောက်တွေကိုကြေညာချက်ထဲတွင်စက်မှုဇုန်ဖွဲ့စည်းသည့်ခရိုင်အကျယ်ဧရိယာ၏မရှိခြင်း၌တည်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်, ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်ရှာပုံတော်မှမိမိတို့ကိုယ်ကို Orient ကပြောသည်။ သင်သည်သူတို့ smoky ဆင်ခြေဖုံးအတွင်းပထမဆုံး etapd လေထီးစီးခြင်းအတွက်လုပ်ခံရဖို့စတင်ခဲ့ကြောင်းနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားခရီးသွားလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသေချာမညျဖွစျကွောငျးစီမံကိန်းများသည်, Abbasid အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ Harun Al-Rashid မစ္စတာ Faraci အားဖြင့် Margrave 8 ပွငျဆငျခွငျးဖွစျကွောငျးဖျောပွ Kent ။ အာရုန်သည်ရာစု, Rashid ၏ကိုယ်စားပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရဲတိုက်၏ပွနျလညျထူထောငျသူသဘောပေါက်ဟုပြောသည်။ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော, ဆပ်ပြာ ...
Denizli ကုန်းခရီးသွားလုပ်ငန်း cable ကိုကားတစ်စီး၏ဆောက်လုပ်ရေးလှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်အပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကြာ 01 / 08 / 2014 Denizli တောင်တော်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖော်ကျူးဖို့ကေဘယ်လ်ကားများ၏အပြည့်အဝလွဆောက်လုပ်ရေးကြာ: cable ကိုကားတစ်စီးကနေကုန်းခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားဧည့်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန် Denizli မြို့ပြစည်ပင်သာယာသုံးစွဲပြီးသံလွင်အတွက်လူနေအိမ်များနှင့်အပန်းဖြေအဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ခြင်းကြာလည်းမြို့ရဲ့အခြားရွေးချယ်စရာခရီးသွားလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများကိုအကြိုးအတှကျဘဝမှ Plateau ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအဆိုပါစီမံကိန်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ် cable ကိုကားတစ်စီး၏ဘူတာရုံစတင်ခဲ့ပါသည်ရာအရပျ finish ကို xnumx ရဲ့9တိုက်ရိုက်လိုင်း၏ကွန်ကရစ်များနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအကျင့်ကိုကျင့်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါစတင်ခဲ့ပြီးထိပ်ဘူတာမှပြီးစီးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်မှာရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ Denizli တောင် Aegean ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီများ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ Denizli မြူနီစီပယ်၏ဘဝများကအခြားရွေးချယ်စရာခရီးသွားလုပ်ငန်းဒေသများစည်းရုံးဖို့62 ၏ရှေးဟောင်းမြို့တော်သန်းခရီးသွားဧည့်သည်တစ်နှစ်လျှင်သွားရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် ...
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူခရီးသွားလုပ်ငန်း Sinop ပြန်လည်ရှင်သန် 09 / 07 / 2014 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူခရီးသွားလုပ်ငန်း Sinop Sinop ပြည်နယ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းညွှန်ကြားရေးမှူး Hikmet Tosun, လေနှင့်အဝေးပြေးလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အဦပြန်လည်ရှင်သန်သူမြို့ပြခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အတူအကျိုးအမြတ် mobility ကဆိုသည်။ Sinop ပြည်နယ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းညွှန်ကြားရေးမှူး Hikmet Tosun, မြို့ပြခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ပြဌာန်းချက်အားဖြင့်ရရှိခဲ့ mobility ၏လေကြောင်းလိုင်းနှင့်လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူခြင်းဟုဆိုသည်။ Tosun "သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အရည်အသွေးတိုးမြှင့် Sinop အတွက် 50 ရာခိုင်နှုန်းကခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်နေ့စဉ်ခရီးစဉ်တိုးလာနေပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ ပင်လယ်သဘောသဘာဝရဲ့အစိမ်းရောင်နှင့်အတူအဓိကခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာဖြစ်သော Sinop ၏ပင်လယ်နက်မြို့, မှာ, ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်များ၏အာရုံစိုက်မှုများ၏အာရုံစိုက်ဖြစ်လာသည်။ အထူးသဖြင့်, လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှဝင်ရောက်ခွင့်လွယ်ကူပေးဖို့ Samsun-Sinop နှင့်အတူယခုနှစ်ဖွင့်လှစ် ...
အစာရှောင်ခြင်းရထား Bileciki ကိုလည်းခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းအရှိန်အဟုန်မြှင့်ပါလိမ့်မယ် 27 / 01 / 2014 အစာရှောင်ခြင်းရထား Bileciki ကိုလည်းခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းအရှိန်အဟုန်မြှင့်ပါလိမ့်မယ်: အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအကြားအကွာအဝေးကိုလျှော့ချမည်သည့်3နာရီမတ်လနှင့်လာမည့်ခရီးသည်၏အစတွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ မတ်လ 2014 54 ကီလိုမီတာရှည်လျားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများကပြီးစီးရန်စီစဉ်ထားစီမံကိန်းများအပေါ် xnumx't 35 နှင့် 12 ကီလိုမီတာရှည်လျား viaduct ရှိပါတယ်။ တရုတ်နှင့်တူရကီတို့သည်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း, ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတခုလိုင်း Bilecik, Osman ကဆောငျရှကျနှင့် Bozoyuk အတွက်တတ်၏။ စီမံကိန်း site ကိုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့် Bilecik မြို့တော်ဝန် Selim Oiler တစ်ဦးအကဲဖြတ်လုပ်သူစီမံကိန်းတူရကီနှင့် Bilecik များအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ Oiler နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်, ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူ Bilecik ...
အဆိုပါစီးပွားရေးBeyşehirလှုံ့ဆော်ဖို့ Konya-Antalya မြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်း 30 / 01 / 2018 Özaltın, Beyşehirမြူနီစီပယ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အစည်းအဝေးတွင်သူ၏မိန့်ခွန်းထဲတွင်ကောင်စီကစီစဉ်သည့်xnumx.danışBeyşehir AK ပါတီခရိုင်အဖွဲ့အစည်းမှာလူနေမှုပုံစံရေးစင်တာသည်, Beyşehirသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများÖzaltınညျညှနျးBeyşehirထွက်သယ်ဆောင်အလုပ်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီဟုဆိုသည်။ ဘူတာရုံBeyşehir-Seydişehirအတွက် created ပေါ့ပလာပင်များအကြားတည်ရှိပါလိမ့်မည်Özaltınပြုအလုပ်၏ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို-အလေးပေးပြန်လည်ပေးသော Konya-Antalya မီးရထားလမ်းဟုသူကဆိုသည်။ မီးရထားလမ်းကြောင်းများ၏အရေးပါမှုကိုဆွေးနွေးခြင်းÖzaltın, ပထဝီတည်နေရာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဤဒေသဖြတ်သန်း, "ဒါဟာရထားတစ်ချိန်တည်းမှာပြောင်းရွေ့ခံရဖို့ခရီးသည်နှင့်ကုန်တင်ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်လမ်းကိုပါပဲ။ ထို့ကြောင့်, စကျင်ကျောက်များနှင့်လက်နက်များဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း, ပို့ဆောင်ရေး၏ကိုယ်စားအဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကို ...
'' သင်သွားလျှင်ပြုလုပ်ခြင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်တင်ဒါ! 'Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်သားကောင်များ
jolly တောင်တန်း Cableway Düziçiစီမံကိန်းကိုခရီးသွားလုပ်ငန်းလှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်
Denizli ကုန်းခရီးသွားလုပ်ငန်း cable ကိုကားတစ်စီး၏ဆောက်လုပ်ရေးလှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်အပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကြာ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူခရီးသွားလုပ်ငန်း Sinop ပြန်လည်ရှင်သန်
အစာရှောင်ခြင်းရထား Bileciki ကိုလည်းခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းအရှိန်အဟုန်မြှင့်ပါလိမ့်မယ်
အဆိုပါစီးပွားရေးBeyşehirလှုံ့ဆော်ဖို့ Konya-Antalya မြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်း
အစာရှောင်ခြင်းရထား Edirne သည့်လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးဘဝကလှုံ့ဆော်
Plovdiv Edirne ရထားမြို့တော်ရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်လည်ရှင်သန်ရန် Trips